Ubuntu 20.10 uye 20.04, bhagi iyo yaibvumidza kusvetuka yekuvhara screen | Linux Vakapindwa muropa
Ndakagara ndichiwana zvimwe "zvinosetsa", mune makotesheni, mavhidhiyo aya anoenda kuhutachiona uye anoratidza maitiro aunokwenenzvera nhare yekuvhara nharembozha ine Android kana iOS usingashandise password, iyo muChirungu inozivikanwa se "kudarika". Kutamba kwekubata uye zvinhu zvekuita zvinoratidza kuti inguvai vanhu yavanofanira kuita "zvisina maturo." Izvo zvakare zvinoita kuti ivo vabudirire izvi nekuongorora kodhi uye nekuwana mamwe mabugs. Zvisinei zvakawanikwa, paive nechikanganiso chakafanana mu Ubuntu, zvakananga mukati Gorilla gorosi uye Focal Fossa.
Iyo bhaggi inoonekwa paCanonical's chengetedzo webhusaiti se USN-4958-1, uye rondedzero pakutanga haina kusimudza chero maaramu: unogona kugadzira izvo zvinoshandiswa Caribou Ichavhara zvisingatarisirwi kana ikapihwa musuwo wakasarudzika. Nekuti chii chiCaribou? Ndechipi dambudziko kana ndikasamboishandisa? Sezvatinoverenga mu yepamutemo software peji, iri chaizvo iri chaiyo keyboard. Dambudziko kana kuti nei kukundikana mukati maro kuri kwakakomba ndekwekuti rinoonekwa pane yekuvharira sikirini.
Caribbean inogona kugadzira Ubuntu kukiya skrini kupfuura
Chii chinotonyanya kutyisa kuverenga chikamu "Zvidimbu":
Iyo yeCaribou pa-screen keyboard yakawanikwa ichikwanisa kupunzika painopihwa mamwe maitiro ekuisa. Anorwisa anogona kushandisa izvi kupfuudza screen lock maapplication ayo anotsigira kushandisa Caribou senzira yekuisa.
Mhinduro iri nyore: kana mumwe munhu arikushandisa Ubuntu 20.10 kana Ubuntu 20.04Iwe unongofanirwa kuvhura iyo software centre uye woisa zvidzoreso, gamuchira iwo meseji uyo unonyevera kuti ikozvino yave kuwanikwa kana kuvhura terminal uye nyora sudo apt kugadzirisa && sudo apt kusimudzira. Chero zvazvingaitika, kumisikidzwa kweCaribou iyo isingachabatike ichaiswa. Haisi bhagi iyo chero munhu anogona kushandisa, asi zvakakodzera kuti igadziriswe nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gadziridza kana usiri kushandisa yazvino vhezheni yeUbuntu - vanogona kusvetuka yekukiya skrini